जिबनसैली – " कञ्चनजंगा News "
यी हुन् हस्तमैथुनका फाइदा (भिडियो सहित)
No Comments on यी हुन् हस्तमैथुनका फाइदा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । हस्तमैथुन अर्थात सेक्स जीवनसँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरु गर्न लजाउने समाज छ । जो कोही पनि खुलेर यससम्बन्धी बोल्च रुचाउँदैनन् । हस्तमैथुन गर्नु सामाजिक रुपले अनैतिक हो भन्नेसम्म पनि गरिन्छ । कतिले त हस्तमैथुन गर्नाले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न हुन्छ भन्छन् । तर विशेषज्ञहरु भने हस्तमैथुन स्वास्थ सेक्ससँग जोडिएको बताउँछन् । हात वा अन्य कुनै पनि कुराबाट यौन आनन्द लिने तरिका भएकाले हस्तमैथुन पुरुष वा महिलाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार हस्तमैथुन गर्नुका पाँच फाइदाहरु यस प्रकार छन् :
१. हस्तमैथुनबाट मासिक धर्मसँग जोडिएको दुःखलाई हटाउन तथा घटाउन मद्धत गर्छ । हस्तमैथुनबाट निस्कने रसायनका कारण मासिक धर्मका क्रममा हुने दुःखलाई घटाउन शक्ति मिल्छ ।
फिनवर्ग स्कुल आफ मेडिसिनका स्त्री तथा प्रसूति रोग प्रोफेसर लारा स्ट्रीचरका अनुसार हस्तमैथुनबाट आउने पानीले योनीमा हुने सुख्खापन हटाउन मद्धत गर्छ ।
२. पत्रिका ‘सेक्सुअल एण्ड रिलेशनसिप थैरापी’का अनुसार यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । यसले संक्रमणबाट बचाउछ । कयौं शोधबाट पत्ता लागेको कुरा जसमा चरमाेत्कर्ष (आर्गेज्म) बढी हुन्छ उसमा इम्युनोग्लोविन ‘ए’ को मात्रा बढी हुने र रुघाखाेकीबाट पनि बचाउन यसले मद्धत गर्छ ।
३. फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्चका शोधकर्ताहरुका अनुसार हस्तमैथुनपछि अल्छी तथा निद्रा लाग्ने हुनाले अनिन्द्रालाई हटाउने यो सही उपाय हो खासगरी पुरुषहरुमा । किनकी हस्तमैथुनपछि उनीहरुमा यौन इच्छा हुँदैन र उनीहरुलाई निद्रा लाग्छ ।
४. यसले शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि रिल्याक्स महशुस हुन्छ ।
५. विशेषज्ञहरुका अनुसार हस्तमैथुनबाट यौन सम्बन्ध निर्माण गर्ने मौका मिल्छ । यसले ति महिलाहरुलाई पनि मद्दत मिल्छ जसको सेक्स पार्टनर चाँडो स्खलित हुन्छन् ।
No Comments on शिशु जन्मिएपछि कति दिनपछि यौनसम्पर्क गर्ने ?
विभिन्न तर्क भए पनि सर्वप्रथम सुत्केरी अवस्थामा रहेकी आमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै रूपमा तयार हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार हुनुभन्दा पहिले नै पतिले यौनसम्पर्क राख्ने इच्छा देखाए वा दबाब दिए के गर्ने भन्ने भय कतिपय नेपाली महिलामा हुनसक्छ र
यो निकै असजिलो परिस्थिति हो।
सुरुका केही दिनमा हुने प्रसवपछिको श्राव हुन बन्द भएपछि कतिपय महिलाले योनिमा सुख्खापन महसुस गर्न सक्छन्। योनि सुख्खा भएको अनुभव छ भने, प्-थ् वभििथ वा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थले यौनाङ्गको स्पर्श वा लिङ्ग प्रवेशलाई सजिलो बनाउन सक्छ। केगेल कसरत लाभदायक हुन्छ। यसले योनि तथा भग क्षेत्रको मांशपेशीलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ।
यौन उत्तेजना भएको स्थितिमा गर्भावस्थाभन्दा पहिलेको जस्तो पूर्ण र शारीरिक रूपमा सक्रिय किसिमको यौन सम्पर्कमा संलग्न हुनुपर्ने भन्ने छैन। कोमल तरिकाले बिस्तारै अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। स्पर्श, अंकमाल अति विस्तारै यौनाङ्गको स्पर्श, सहजता हेरी अघि बढ्ने सजिलो आसनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। असजिलो भएमा बन्द गर्ने, राति नै वा बेस्सरी थाकेको बेला
यौनसम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् केहि रहस्यमय जानकारी
No Comments on श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् केहि रहस्यमय जानकारी
संसारमा कसैको मनको कुरा कसैले पनि जान्न सक्दैन । अझ झन स्त्री जातीको कुरा पुरुषले जान्न त झनै मुस्किल हुने गर्दछ । संसारमा यस्ता महिलाहरु पनि भेटिने गर्छ जसले मनको कुरा मनमै गम्स्याएर राख्ने कसैलाई पनि नभन्ने हुन्छन् । यस्ता महिलाहरुले आफ्नो श्रीमान हुँदा हुँदै पनि पर पुरुषसँग प्रगाण सम्बन्ध राखि आफ्नो घर बिगार्ने खालका काम गरेको उदाहरण पनि थुप्रै भेटिन्छन् । यस्तो हुन नदिनको लागि समयमै सचेत रहेर जानौ यस्ता कुराहरु जसले तपाईलाई यसबारे सहयोग गर्नेछ
उनका केटी साथी कति छन् ? केटी साथीसँग पहिलेको भन्दा बढी समय बिताउँछिन कि बिताउन्नन ? कतै केटी साथीलाई भेटन जाने भनेर अरु कसैलाई भेट्न त गएकी छैनन् रु केही समयअघिसम्म बेलुकी अरुसँग समय नबिताउने तपाईंको श्रीमती एकाएक धेरैजसो समय बाहिर नै बिताउने गर्न थाल्छिन् भने तपाईंमाथि धोका भइरहेको हुनसक्छ । तपाईंकी श्रीमती केटी साथीहरुसँग नभई अरु कुनै मानिससँग समय बिताइरहेको हुनसक्छ ।
नुहाउने र शारीरीक ब्यायम
विगतमा दिउँसो नुहाउने काम नगर्ने तपाईंकी श्रीमती घर फर्कने बेला नुहाएर आएको जस्तो देखिन्छिन् रु के उनी पहिलाको भन्दा जीममा बढी धाउने गर्दछिन् ? सम्झिनुस् त्यहाँ पनि तपाईंलाई गुमराहमा राखिएको हुनसक्छ ।
श्रीमतीको बास्ना श्रीमतीले पहिले र अहिलेमा कत्तिको बास्नादार हुने गर्छिन ? उनीबाट महिलाको भन्दा पुरुषको बास्ना बढी आइरहेको छ ? उनको यो नयाँ बास्ना महिलाको भन्दा पुरुषको बढि हो कि, अथवा त्यस्तै खालको बास्ना आफ्नो कुनै साथीको हो कि त्यो याद राख्नुहोस् ।
जानी राखौ यस्तो बेला महिलालाई सा ’री ’री क चा’ह ना बढी हुन्छ !
No Comments on जानी राखौ यस्तो बेला महिलालाई सा ’री ’री क चा’ह ना बढी हुन्छ !
यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ ।जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे ।
त्यस अनुसार, महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ ।त्य
अनुसार, महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए ।
यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ
बच्चालाई हुर्काउँदा आमा–बुवाबाट हुने केही गल्तीबारे जानकारी !
No Comments on बच्चालाई हुर्काउँदा आमा–बुवाबाट हुने केही गल्तीबारे जानकारी !
हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासित हुन सिकाउँछन् तर कहिलेकाहीँ अभिभावकको अत्यधिक लाड–प्यारका कारण छोराछोरी निकै जिद्दी हुन्छन् । यसले अभिभावकलाई निकै चिन्तित पनि तुल्याउने गर्छ । आमाबुवाको अत्यधिक मायाले बच्चालाई बिगार्न पनि सक्छ । जिद्दी बच्चालाई बाहिर घुम्न लैजान पनि गाह्रो छ, किनकि उसले कुनै पनि चीज वा सामान लिन जिद्दी गर्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको बच्चाले अरूको अगाडि जिद्दी गर्दा तपाईंलाई अप्ठेरो समेत लाग्न सक्छ ।आजको यस लेखमा हामी तपाईंलाई बच्चालाई हुर्काउँदा आमा–बुवाबाट हुने केही गल्तीबारे जानकारी दिँदैछौँ ।
१. जिम्मेवारीबाट टाढा राख्नु:अक्सर आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई सानो सम्झेर कुनै जिम्मेवारी दिने गर्दैनन् । यसले गर्दा बच्चाले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्दैन र लापरवाह हुन्छ । यसबाट बच्न आफ्नो बच्चालाई बाल्यकालदेखि नै सानो भएपनि जिम्मेवारी दिने काम दिनुहोस् । उदाहरणका लागि – उनीहरूलाई आफ्नो कोठा सफा गर्न भन्नुहोस्, खाना खाएपछि बेसिनमा प्लेट राख्न भन्नुहोस् । बच्चाहरूलाई आफ्नो स्कूलको ब्याग आफैँ मिलाउन भन्नुहोस् ।
२. आफ्नै काममा अल्झिरहनु:आजको व्यस्त जीवनमा अभिभावकहरू आफ्नो कार्यालयको काममा नै व्यस्त हुने गर्छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई खासै ध्यान दिन भ्याउँदैनन् । यसैबीच अभिभावक अफिस जाँदा बालबालिका घरमा एक्लै हुन्छन् । उनीहरुसँग टिभी र मोबाइल मात्रै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बच्चाले के हेर्छन् भनेर आमाबाबुलाई पत्तो हुँदैन । आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि समय निकाल्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरुलाई घुमाउन लैजानुहोस् ।
३. हरेक जिद्दी पूरा नगर्नुहोस्:हरेक आमाबाबुले आफ्नो बच्चालाई धेरै नै माया गर्छन् त्यसैले जब छोराछोरीले केहि माग्छन्, उनीहरूको हरेक माग पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बच्चाहरुको मनमा आफ्नो सबै जिद्दी पुरा हुन्छ भन्ने पर्छ । उनीहरुलाई लाग्न थाल्छ कि उनीहरुले चाहेको कुरा सजिलै पूरा हुन्छ । फलस्वरुप, उनीहरुको जिद्दीपना बढेको बढ्यै हुन्छ ।
४. अनुशासन आवश्यक छ:बच्चा अनुशासनमा रहँदा सबैलाई मनपर्छ । तर यदि बच्चा जिद्दी र मात्तिएका छन् भने, उसले सबैलाई समस्यामा पार्ने गर्छ । बच्चाहरु अनुशासनमा रहन धेरै नै महत्वपूर्ण छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सधैं ठूलाहरुको आदर गर्न सिकाउनुहोस् ।
५. उपहार नदिनुहोस्:आमाबाबुहरू आफ्नो बच्चा सधैं खुसी होउन् भन्ने चाहन्छन्, त्यसैले उनीहरू रिसाएका बेला उपहार दिएर फकाउने प्रयास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा केटाकेटीलाई पनि लाग्छ कि उनीहरु रिसाएको बेला उपहार पाउँछन् र पछि गएर उनीहरुको बानी यस्तै हुन्छ ।आफ्नो बच्चा हुर्काउँदै गर्दा यी गल्ती गर्नबाट जोगिनुहोस् । यसले तपाईंको बच्चालाई जिद्दी बनाउन सक्छ । बच्चाको राम्रो आचरणमा तपाईंको पालनपोषणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
No Comments on सबै महिलाले प्राय: गर्ने यी सामान्य गल्ती जसले आफ्नो पुरुष पार्टनरलाई नपुंशक बनाइरहेको छ
काठमाडौं । दैनिक जीवनमा त्यहाँ केहि कुराहरू छन्, जुन पुरुषहरूले मन पराउँदैनन् ।
तीमध्ये कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन ओछ्यानमा मात्रै गरिन्छ । कुनै पनि पुरुष साथिले त्यो महिला साथिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न चाहँदैन, जसले शारीरिक सम्पर्कका क्रममा केही सामान्य कुराहरू गर्छिन् ।
महिलाको कुराले केटाको बनेको मुड पनि अचानक बिग्रन्छ । त्यसैले प्रायः महिलाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि शारीरिक सम्पर्कका क्रममा आफूले आफ्नो श्रीमान वा प्रेमीसँग कस्तो व्यवहार वा कुराहरु गर्नुपर्छ ।
यदि एकपटक गल्ती भयो भने जुनसुकै काम गरे पनि त्यो रोमाञ्चक र रमाइलो नै हुँदैन ।
आज हामी महिलाहरुका केहि यस्ता सामान्य गल्तीहरु बारे जान्ने छौ, जुन उनीहरु आफ्नो साथिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने क्रममा गर्छन ।
कहिलेकाहीँ पुरुषहरूले महसुस गर्दैनन् कि तपाईं तिनीहरूको अगाडि नक्कली चरम उत्तेजित भएको नाटक गरिरहनु भएको छ ।
आफ्नो महिला साथिले आफूसँग सन्तुष्ट नभई नाटक गरिरहेकी छिन् भन्ने कुरा पुरुषले जान्न चाहेको हुँदैन् । तपाईंले आफ्नो साथिलाई ओछ्यानमा के मनपर्छ भन्ने बारे खुलेर बताउनुपर्छ ।
तिनीहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुहोस्, ताकि तपाईंले वास्तविक चरम उत्तेजित हुन सक्नुहुनेछ । यस्तो हुँदा तपाईंको केटा साथिले पनि सन्तुष्टि महसुस गर्न सक्नेछन् ।
दिनभरीको थकानपछि ओछ्यानमा उत्तेजित भएर केटा मान्छे केही नयाँ गर्न चाहन्छ । यो उनीहरूको दिनभरको आकर्षण हुन सक्छ ।
तर हरेक दिन तपाईंको पक्षबाट अस्वीकार हुन थाल्यो भने त्यो उसको लागि निराशाजनक हुन सक्छ ।
महिलाहरूले पनि दिनभरि थकानको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ, तर ऊर्जा गुमाएर पुरुषले गरेको शारीरिक सम्पर्कको अपीललाई अस्वीकार गर्नु कत्ति पनि ठीक होइन । यदि तपाइँ थकान महसुस गर्नुहुन्छ भने, त्यसको समाधान तत्काल खोज्नुहोस् ।
शारीरिक सम्पर्क गर्नको लागि आफ्नो सुत्ने कोठाबाट बाहिर निस्कनुहोस् । तपाईंको घरमा भान्सा, बाथरूम, काउन्टर आदि धेरै ठाउँहरू हुन्छन्, जहाँ तपाईं आफ्नो साथिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ ।
शयनकक्षमा मात्र शारीरिक सम्पर्क गर्नु र आफ्नो साथिले भनेपछि पनि कुनै नयाँ प्रयास नगर्नु निकै झ्याउ लाग्ने खालको व्यवहार हुन जान्छ ।
शारीरिक सम्पर्कका क्रममा सबै कुराको चर्चा गर्नुपर्दैन । जब शारीरिक सम्पर्कको कुरा आउँछ, सबै कुराहरूलाई न्यूनतम राख्नु राम्रो हुन्छ ।
यस अवधिमा, पुरुषले केहि चीजहरू मात्र राम्रो महसुस गर्छन्, जस्तै सास फेर्न, फोहोर कुरा गर्नु र आफ्नो साथिलाई उत्साहित बनाउनुलगायत कुराहरु छन् । तर त्यस समयमा घरेलु सामान वा अन्य अर्थहीन कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्ने महिलाको वानी हुन्छ, जुन तत्काल हटाउनुहोला ।
राम्रो शारीरिक क्रियाको लागि, तपाइँ आफ्नो साथिसँग ढिलो र उसको लयमा हुन आवश्यक छ । आफ्नो गतिमा काम गर्नु र आफ्नो साथिको गतिको ख्याल नगर्नुले तपाईलाई स्वार्थी बनाउन सक्छ ।
आफ्नो साथिको गतिलाई निरन्तरता दिनुहोस् । जब तपाई दुबैले यो राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि शारीरिक सम्पर्क त्यसपछि अझ आन्नदमयी भयो ।
महिलाहरूले यसरी गर्छन…
No Comments on महिलाहरूले यसरी गर्छन…
मेरो नाम टिना हो र म ह स्त मै-थुन गर्छु । तपाईं गर्नुहुन्छ ? धेरै होइन । यद्यपि महिला ह स्त मै-थुनका सम्बन्धमा उति धेरै चर्चा हुँदैन । के उनीहरु खुलेर कुरा गर्छन् ?
म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा ह स्त मै-थुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु ? स्पष्ट छ उनीहरुलाई यसको लागि स्वतन्त्रता छैन । यदि कुनै केटाले हामी सबैजसो केटीहरुलाई ह स्त मै-थुनको बारेमा सोधे भने हाम्रो जवाफ हुन्छ, ‘गरेको छैन, यो अ-श्ली ल हो ।’ हामी हस्तमै-थुन गर्नेले पनि जवाफ यस्तै दिने गर्छौं ।
जबकि यही प्रश्न कुनै केटालाई सोधियो भने उनले धक नमानी भन्नेछन्, ‘लुकाउने कुरा के छ र ? ह स्त मै थुन गर्छु ।’ यी जवाफहरुबाट के भेउ मिल्छ भने, महिलामा का-मुकता हुँदैन र यस सन्दर्भमा पुरुष अगाडि छन् ।
हस्तमै-थुन हा निकारक छ ? जो युवती ह स्त मै-थुन गर्छन् उनीहरु यस्तो कुरा गर्न लजाउँछन् । तर, पुरुषको हकमा यस्तो छैन । म त्यस्तै किशोरी थिएँ, जोसँग व्यवहारमा यी सबै हुन्छ । म मान्छु, मेरा कुनैपनि महिला साथीहरुले ह स्त मै थुन गरेनन् । त्यो उमेरमा त मैले पनि गरिन । म सोच्थे कि यो अ-श्ली ल हो, यसले मेरो गुप्तां-ग विकृत हुनेछ ।
अलग–अलग तरिका – किन हाम्रो शरीर र त्यसका लागि यौ- न सुख एक आधारभूत आवश्यक्ता हो भन्ने बुझ्दैनौं । हामीलाई चित्रको माध्यमबाट लिं -ग र भ-जाइना देखाइएको थियो । तर, भ-जाइनाको बारेमा बताइएको थिएन । के अधिकांश मान्छे आफ्नो गु प्ता-ङ्गको बारेमा नबुझी नै ठूला भएका हुन्छन् ।
पो- र्नमा केवल यौ -न उ-त्ते जना महसुस गर्न सकिन्छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्छ कि युवाहरु अलग अलग तरिकाले यौ -न सुख प्राप्त गर्छन् । युवाहरुले आफ्नो गु- प्ताङ्गको बारेमा जान्नुपर्छ । उनीहरुले मूलधारको पो -र्नमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन । मान्छेमा यौ- नसँग सम्बन्धित भ्र म, लाज, पछुतो पनि बाँचिरहेको छ ।
यतिबेला मेरो जवाफ थियो, ‘आमा मसँग यस्तो कुरा नगर्नुहोला ।’ तर, कम्तीमा उनले प्रयास गरे र मलाई अहिले राम्रो लग्यो ।महिला ह स्त मै-थुनका सम्बन्धमा चारैतिर मौनता छ । यो एक हा निकारक मान्यता हो कि, महिला का-मुक हुँदैनन् । म यसलाई बकवास भन्छु । महिला पनि का-मुक हुन्छन् । महिलामा पनि पुरुषमा जस्तै यौ -न इच्छा हुन्छ । उनीहरु पनि पुरुषले जस्तै यौ-नसुख लिन चाहन्छन् ।
हामी कहिले काहीँ यस्तो यौ- न सुख लिन रुचाउँछौं, जहाँ हामी नितान्त एक्लो हुन्छौं । त्यहाँ कोही नहोस् । यति लामो समयपछि म आफ्नो दे-हसँग एकदमै सहज छु । म आफैले आफैबाट यौ-न सुख प्राप्त गर्न सक्छु । म आफ्नो पार्टनरबाट के चाहन्छु ? यस सम्बन्धमा पनि मसँग आत्मविश्वास छ । हरेकको का-मुक अलग अलग तरिकाको हुन्छ ।
मलाई लाग्छ, ह स्त मै-थुन सबैभन्दा सहज र सुरक्षित तरिका हो । कुनैपनि किसिमको स्पर्शबाट तपाईं यौ न सुख लिन सक्नुहुन्छ । यसले अरुलाई कुनै हानी गर्दैन । अरुलाई असर गर्दैन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
राम्रो निद्रा र त-नावमुक्ती – ह स्त मै-थुनले केही ओखतीको काम पनि गर्छ । यसबाट तपाईंले गहिरो निद्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । साथै त-नावबाट मुक्त पनि रहन सक्नुहुन्छ । अरु औषधिबाट यस्तो कुरा सहजै प्राप्त हुँदैन, जुन हस्तमै-नबाट हुन्छ । यसका लागि यौ -न उ-त्ते जनालाई बुझ्ने कक्षा हुनुपर्छ । ह स्त मै-थुनले तपाईं र तपाईंको यौ-नजीवनलाई अरु सशक्त बनाउँछ । विभिन्न अनलाइनबाट साभार
No Comments on शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला छोड्दै नछोड्नु !
ज्योतिष शास्त्र अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले ती महिलाका धेरै गुणहरुबा बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । यी अं ग ठूलो भएका महिला भाग्यमानी हुन्छन–
कपाल– लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन्।
नाई-टो– ठूलो वा ग हिरो ना-ई टो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अत्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन् ।
महिला–पुरुष बिना दुनियाँ चल्न सक्दैन । एकआपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने यी दुई बीच कतिपय यस्ता आनीबानीहरु हुन्छन्, जुन पुरुषलाई मन पर्दा महिलालाई मन पर्दैन भने महिलालाई मन पर्दा पुरुषलाई मन पर्दैन ।यहाँ पुरुषलाई मन नपर्ने महिलाका यि स्वाभाव आनीबानीका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
– धेरैजसो महिलाहरु बेतुकका कुराहरुलाई पनि उठाइरहन्छन् । उनीहरुले बारबार उठाउने यस्ता बेतुकका कुराहरु पुरुषलाई मन पर्दैन । उनीहरु के म मोटी छु,मेरो सौन्दर्य कस्तो छ, मलाई मानिसहरुले कसरी लिन्छन् जस्ता कुराहरु बारबार निकालेर पुरुषलाई हैरान बनाउँछन् ।
–महिलाहरु ठुला झोला बोक्न मन पराउँछन् । तर पुरुषहरुलाई उनीहरुले बोक्ने त्यस्ता ठुला झोलाहरुले उनीहरुप्रति दिक्दारी बढाउने काम गर्छ । अर्कातर्फ पुरुषहरुलाई उनीहरुले बोक्ने ठुला झोलाहरुमा के छ भन्ने जिज्ञासा पलाउँछ, र केटीले बोक्ने त्यही झोला केटाहरुका लागि रहस्यको पोको हुन्छ । तर उनीहरु अक्सर जिज्ञासा मेटाउन असफल हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई केटीले बोक्ने त्यस्ता झोला प्रति बि तृष्णा जाग्छ ।
– महिलाहरु पहिरनका निकै नै सौखिन हुन्छन् । कतिसम्म भने उनीहरु दिनमै कयौं पटक आफ्ना पोशाक परिबर्तन गर्न उत्सुक देखिन्छन् । यस्तो पुरूषलाइ मन पर्दैन ।
– महिलाहरु यदि कसैले उनीहरुको इच्छाविपरितको काम गर्न खोज्यो भने उल्टो प्रतिक्रिया दिने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु त्यस्तो बेला आफुलाई लागेको भन्दा उल्टो कुरा गर्छन र भित्रभित्रै जल्छन् । जुन पुरुषलाई मन पर्दैन ।-
ओठबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ महिलाको गोप्य यौन व्यवहार
No Comments on ओठबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ महिलाको गोप्य यौन व्यवहार
एजेन्सी । ओंठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओंठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओंठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन् । तर ओंठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान मात्र रहेन ।
ओंठले महिलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौन व्यवहार वा चालचलनका विषयमा समेत बुझाउँछ । शरीरका हरेक अंगहरु हाम्रा अन्य अंगहरु कुनै न कुैन हिसाबले अन्र्तसम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् । जस्तो की नाभी (नाइटो) र मानव स्वास्थ्यका बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेजस्तै महिलाको ओंठले उनीहरुको यौन व्यहारसँग सम्बन्ध राख्दछ ।
कत्तै तपाई गलत ‘ब्रा’ त किन्दै हुनुहुन्न ? ‘ब्रा’बारे जान्नै पर्ने यी कुरा
No Comments on कत्तै तपाई गलत ‘ब्रा’ त किन्दै हुनुहुन्न ? ‘ब्रा’बारे जान्नै पर्ने यी कुरा
काठमाडौं । विश्वभरका महिलामा जव कपडाको कुरा हुन्छ निसन्देह त्यहाँ सबैभन्दा पहिला ब्राको बारेमा चर्चा हुने गर्छ । महिला पिच्छे रोजाइ फरक हुनु नौलो कुरा भएन । तर अधिकांश महिलाले ब्रा किन्दा सधै एकै किसिमकाे गलती गर्ने गर्छन । यसै सन्दर्भमा हामी ब्रासँग जोडिएका केही गल्तीबार यहाँ जानकारी गराउदै छौं । जानुहोस् कत्तै तपाई पनि त्यस्तै गल्ती त गर्दै हुनुहुन्न्ः
कमसल ब्रा खरिद
यदि अनलाइन सेलमार्फत ब्रा किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पक्का कमसल ब्रामा पैसा फाल्दै हुनहुन्छ । तर एउटा राम्रो र कमसल ब्रामा आकाश जमीनको फरक हुन्छ । कमसल ब्राका तुलनामा राम्रा ब्राले तपाईलाई सहज र आरामदायी महशुश हुन्छ र नियमित धुँदा पनि त्यसको गुणस्तरमा गिरावट आउदैन । तर कमसल ब्रा २/४ पटक धोएपछि आफ्नो रुपै बदलिन्छ ।
गलत साइजको ब्रा
महिलाहरु यो एउटा गलती अक्सर गर्ने गर्छन । यदि तपाईले किनेर ब्राको साइज फिटिङ गराउनु भएको छैन भने तपाईले पक्कै गलत साइजको ब्रा लगाइरहनु भएको छ । तौल बढ्ने, तौल घटने, गर्भवती हुन वा हार्मोनहरुमा परिवर्तनका कारण महिलाहरुको शरीरमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ । जसका कारणले समय–समयमा ब्राको फिटिंङमा पनि परिवर्तन भई रहेको हुन्छ । त्यसैले केही समयको अन्तरमा ब्रा को फिटिंङ चेक गर्नु पर्छ ।
दुइ दिन एउटै ब्रा लगाउनु
एउटै ब्रा दुई दिनसम्म वा सो भन्दा धेरै दिन लगायो भने ब्रा धेरै दिनसम्म चल्छ भने महिलाहरुको सोचाइ हुन्छ । तर यो सोचाई पूरै गलत छ । र कुनै सत्यता छैन । तपाईको ब्रामा पहिलेकै आकार (सेप) मा आउन पनि समय चाहिन्छ । एक दिन भन्दा बढी लगाएमा तपाईको ब्राको इलाष्टिक नै लुज हुन्छ । यसको साथै एउटै अण्डरगार्मेन्ट (भित्री कपडा) एक दिनभन्दा धेरै लगाउनु अनहाइजीनिक मानिन्छ ।
ब्रालाई वशिङ मसिनमा धुनु
यदि तपाई आफ्नो ब्रालाई वासिङ मेसिनमा धुनुहुन्छ भने त्यो बानीलाई आजै सुध्रानुस् । किनकी ब्रा एकदमै कमजोर फैब्रिकले बनेको हुन्छ । वासिङ मेसिनमा धुनाले ब्राको कपडा विग्रिन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसै त ब्रा हातले धुनु राम्रा मानिन्छ । तर आजभोलि धेरै मानिसले सजिलोका लागि कपडा धुन वासिङ मेसिनको प्रयोग गर्छन । सम्भव भएसम्म ब्रा हातैले धोनुस् भएन भने लान्जरी ब्यागमा राखेर वासिङ मेसिनमा धुदा राम्रो ।
ब्राण्ड अनुसार फरक साइज
यदि तपाई अलग–अलग ब्राण्डमा पनि एउटै साइजको ब्रा किन्नु हुन्छ भने त्यो गलत गरिरहनु भएको छ । ब्राको बैड र कप साइज ब्राण्ड अनुसार फरक–फरक हुने गर्छन् । तर जे भएपनि कुनै पनि ब्राण्डको ब्रा किन्दा लगाएर मात्रै किन्नुस् ।
ब्राको पनि एक्सपायर डेट
यदि तपाई आफूलाई मन परेकोे ब्रा लामो समयदेखि लगाइरहनु भएको छ भने अब त्यो परिवर्तन गर्ने समय आयो । तपाई अचम्भित हुनु हुला एउटा ब्राका आयु ६ देखि ९ महिनासम्म मात्रै हुन्छ भन्ने सुन्दा । यदि तपाईले एउटा ब्रा त्यो भन्दा लामो समयसम्म लगाउनु भयो भने त्यसको हुक झर्न थाल्दछ र स्तनले पनि बाहिर हेर्न थाल्दछन् । यस्ता संकेत देखिन थालेपछि तपाईले बुझ्नुपर्छकी पूरानो ब्रा फ्याकेर नयाँ किन्ने बेला भयो भनेर ।
जसरी तपाई आफ्ना कपडालाई जतन गरेर दराजमा राख्नुहुन्छ त्यसरी नै ब्रालाई पनि राम्रोसँग राखुनु होस् । किनकी हरेक ब्राको आफ्नो युनिक सेप हुन्छ यदि तपाईले सोही अनुसार राख्नु भएन भने त्यसको आकार (सेप) विग्रिन्छ ।